Waraysiga Khadiijo Barkhadle - BBC Somali
Waraysiga Khadiijo Barkhadle
6 Juunyo 2010
Image caption Khadiija Barqadle waxay ka mid tahay ganacsatada waawayn ee Djibouti
Khadiijo Barkhadle waxay ka mid tahay ganacsatada waawayn ee Djibouti waxay wadanka ku leedahay shirkada dhismaha ee haboon, mid Shirkada biyaha biyaha sifaysa ee la yiraahdo Zamsam iyo warshad samaysa rootiga oo layiraahdo Atlanta Bakery.
Khadiijo waxay deganaan jirtay magaalada Atlanta ee dalka Maraykanka.
Macaamiisha ugu wayn ee qadiijo ay wax ka iibiso waxaa ka mid ah ciidamada Maraykanka ee jooga Djibouti, iyo hotelada waawayn ee Djibouti.
Khadiijo waxay hada ku tala jirtaa inay Baasto u samayso ciidamada Maraykanka.
Wariyaha BBCda ee Washington Maxamed Xusein Xaji ayay uga warantay ganacsigeeda.
Warshada kalluunka ee Laasqoray oo ay lahaan jirtay dowladii hore ee Soomaaliya, sanadkii 2000 ganacsato Soomaali ah ayaa dayac tirtay warshada Laas qoray oo soo saari karta ilaa lix tan oo kalluun maalintii, waxayna ku tala jirtaa inay soo saarto 40 tan oo kalluun maalintii.